Lo muntu ukuqamba cishe legend - Isazi samakhambi, izangoma, umthandazi isimangaliso. Akakwenzi yena akukho ukukhangisa, kodwa amahemuhemu okuthi amanzi - ke asikwazi ukumiswa. Travnik Anatoly Grigoriev nokwelashwa amacala akhe aziwa kakhulu ngaphandle Belarus. Akhiwe efika kuwo kusuka kuyo yonke indawo. Ngo ekhemisi abadumile Rubezhevichi nesiyaluyalu kwansuku zonke. Yeka isimangaliso lokhu ikhemisi?
Thina wasungula le ekhemisi abavamile kakhulu emuva ngo-1875, ngesikhathi uMbusi u-Alexander II. Kodwa ngo-1945, ukuba ngihole isikhungo setha Isakhamuzi SI Vilkotskogo owathweswa iziqu esikoleni ezenza imithi. Stanislav uyakuthanda imithi herbal. Ingabe ephulukisa izimali, okwabiwe, ngokuyisisekelo, nabantu ajwayelekile.
Vilkotsky eqoqwe amabhuku ezingavamile, imithi herbal, zokupheka herbal eqoshiwe. By the way, umfowabo kwaholela endlini ukushicilela "Incwadi Medical", kwakukhona amaqoqo zokupheka Rubiaževičy. Ngo ngemuva obhekwe kwamaphilisi kweminyaka, imithi herbal wayebhekwa njengoba ngasasizi. Ngaphezu kwalokho, labo sina wahlanganyela Folk imithi, wamangalelwa ngokuthi charlatanry.
Nokho, kudingeka impahla eluhlaza ukwenziwa kwemithi. Futhi Vilkotsky got ekhemisi yakhe yaba maphakathi amakhambi okwelapha workpiece. Shona futhi ithole imvume esemthethweni okwenza izidakamizwa. On endaweni elaliyiSoviet Union ngo ngeminyaka yoma kwakunamabandla amathathu fitoapteki kuphela: ekhatsi Kiev, Vilnius futhi Rubezhevichi.
Ngokushesha mayelana Vilkotskom futhi ekhemisi amahemuhemu wazungeza izwe. Yena elungisa izindlela, ngisho nezikhulu ezinezikhundla eziphezulu, kokubili Belarusian futhi kusukela "eMoscow ngokwayo." Ngo-1975, Stanislav waya ukuphumula okufanele. abaphathi okusha lapha ungahlali isikhathi eside. Kodwana ngemva kweminyaka emithathu lapha kwafika udokotela osemncane Anatoliy Ivanovich grigorev. Futhi konke kwashintsha.
Wazalelwa Anatoly e Gorodok wesifunda, Vitebsk esifundeni. Wathweswa iziqu kusukela Vitebsk Medical Institute. Kube waba nesithakazelo amakhambi. Ngesikhathi uMnyango Pharmacognosy emsebenzini ngokwesayensi. Lomkhuba ebibanjelwe Zonke-Union Isikhungo imithi herbal e Moscow, lapho ngafunda okuningi. Ngifanele Senchilo, umuntu emangalisayo futhi academician.
Grigorev Anatoliy Ivanovich wathunyelwa zokusabalalisa in the ishede ezenza imithi ku Zaslavl. Ngokushesha wacelwa ukuba esikhundleni okwesikhashana Rubezhevichi inhloko inombolo ekhemisi 128. Wavuma ukusebenza lapha izinyanga eziyishumi nambili. Kodwa waqhubeka phakade. A wemithi abasha bathandile konke lapha - kanye ekhemisi, kanye nabantu umsebenzi.
Uchwepheshe owaziwa, ayengawathola umsebenzi esibhedlela wedolobha. Washaywa ngokuphindaphindiwe ababemenyelwe nezikhungo zezokwelapha, enza kumabonakude, ukuhola ikholomu ephephandabeni. Kodwa Anatoly ukholelwa ukuthi wonke umuntu kufanele enze lokho ayehlose. Grigoriev lapha esikhundleni sakhe. Ikakhulukazi Metropolis asebeke bangenza ngathatheka phezu kwakhe. Futhi lapha - echibini, umfula, ukudoba.
Anatoly Ivanovich akakuthandanga ubizelwa a Herbalist. Noma kunjalo, eqinisekisiwe specialist. Abantu bendawo zimbiza ngenhlonipho - "wemithi pan."
Manje fitoapteka inombolo 128 - okungenye yezinkundla ezinkulu kunazo zonke eYurophu eseMpumalanga. Minyaka yonke uthathe abagawuli futhi kusetshenzwe ukuze amathani nantathu izitshalo. Lungiselela namaqoqo esiyingqayizivele zokupheka yasendulo eminyakeni engaphezu kwamakhulu amabili. Kulezi amakhambi ayisithupha nanhlanu.
Ekuqaleni nineties sazama usethe Imali yokukhiqiza. Savula izinhlangano ezimbili zokukhiqiza. Kodwa abazange siphila ezimweni ezinzima emakethe. Nokho, Grigoriev, Anatoly Ivanovich engazange alilahle ithemba lokuthi ngolunye usuku idili kushintshwe.
abantu abayisithupha abasebenza ekhemisi. Ngaphezu izimali, benza yokugcoba, isithako nomuthi. Zonke amakhambi kuvuna bebodwa, njengoba ngamunye wabo izici nokucubungula imibandela yayo. Futhi okubaluleke nakakhulu, utshani kufanele kube lendawo, Belarus. Pharmacy in Rubezhevichi kuphela lapho wemithi useyayamukela nanikeza izivakashi.
iyona reception kanjani?
Anatoly uthi amacala amaningi uzilungiselele ngokuvumelana nemiyalelo ngabanye. isimo okugunyaziwe: kumelwe mathupha ukubona nokuzwa isivakashi. Ukuxhumana wokubonisana ayinikezi iseluleko. Grigoryev uthi ababhuli, isithombe ngokusebenzisa izihlobo ngeke ukuphulukisa.
Abasizi ngempela ujwayelene ikhadi wezempilo wesiguli. Kuyadingeka ukubona ukuthi ukuqokwa kwakhe nemithi ehambisanayo. Ngaphezu kwalokho, imali efanayo ingase iye komunye umuntu - akukho. Utshani - lawa imithi efanayo kanjalo thokozisa ukwelashwa, ngokulandelana.
Anatoliy Ivanovich grigorev ngokwethembeka uthi isiguli, kungakhathaliseki ukuthi yini noma cha ukwelashwa ngamakhambi. Luncoma ukuqoqwa futhi likuchaza ngokuningiliziwe indlela ukupheka, nini, kanjani futhi kangakanani ukuthatha.
Ngosuku kwenzeka nedlanzana izivakashi ezimbalwa. Abantu abavela kwamanye amadolobha amakhulu, izifunda kanye namazwe. Ngakho-ke, pre-ukubhaliswa kwenziwe ngocingo.
Lapho ukuthatha zokupheka?
"Namuhla," Isikhwama osemqoka "cishe eziyinkulungwane ekhemisi nemiyalelo amacala yokugcoba, isithako nomuthi" - uthi Anatoliy Ivanovich grigorev. Rubiaževičy Bebelokhu baziwa ngokuba herbal yayo. Okuthile njengefa kusukela esasisandulele, kuhlanganise nemibhalo yesandla yasendulo embalwa ethile yamakhambi. Iminyaka eminingi wayenesifo eqoqwe zokupheka, ukwabelana ngazo, kanye nosebenza nabo wezokwelapha.
Anatoly uthi trust imithombo ethembekile kuphela. Ukulungisa izimali bona ukushaja ekhemisi yabo nemiyalelo kusuka kumaqoqo omethembayo iminyaka. Unethemba izincwadi ezinyatheliswa ngaphambi 1986. Ngaleso sikhathi kwakukhona umsebenzi okhethekile, ogama Ukwakheka kunodokotela eyaziwa afakiwe. Ngaphansi iresiphi ngalinye amasignisha yabo.
Ekhemisi has a zezinkambi engamakhambi ejwayelekile -. Amavithamini, ukukhwehlela, njll Kukhona umdlavuza. Eminyakeni ethile edlule, ngazama izidakamizwa amacala ekwelapheni izimila ingozi. Imiphumela eyimpumelelo oncologists anentshisekelo kanye banquma ukuzama kubo ekwelapheni izimila ebulalayo. Sacela ukuba usizo Anatoly Ivanovich Grigoriev.
Travnik kwaba amacala ayisishiyagalolunye isikhungo Oncology. ukwelashwa Engamakhambi Kwenziwa ngokuhlanganyela imithi. Njengoba kuboniswa kugcinwa odokotela, imbiza aqede iziguli nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa baye baqaphela ukuthi yokutakula kuyoba ngokushesha.
Kuyini amandla amakhambi?
Umuthi herbal unalo ilungelo lokuthatha khona, kanye imithi yokwelashwa, ukubhucunga nokunyakazisa umzimba ukuhlinzwa. Amakhambi zinhle e ukuthi zingabantu non-enobuthi njengoba izidakamizwa. Lokhu akusho nganoma iyiphi indlela kusho ukuthi kufanele sishiye ukuphathwa okwelapha, uma kunesidingo.
Amacala kuxazululwa isimila, kuhlanganise fibroids futhi mastitis. Lapho Ekuthathweni kahle ukuphumelela ukwelashwa 75%. Okuningi kuxhomeke isikhathi sokwelashwa. Uma lesi sifo hhayi egijima, kungenzeka ukwenza kwezinye izimo ngaphandle ukuhlinzwa.
Awu ukusiza utshani alulame ukwelashwa ngamakhemikhali kanye nokuhlinzwa. Anatoliy Ivanovich grigorev uqinisekile in Oncology kufanele sigcwaliswe esibanzi ukwelashwa - imithi kanye namakhambi.
Ingabe kukhona izifo ezingaba okwamanje luphathwe amakhambi? Grigoryev akukuniki izithembiso eziyize, futhi obala uthi uyabona ukuthi akanakuba aphathe lupus erythematosus, psoriasis, yi-multiple sclerosis ne-isithuthwane kwabadala. amakhambi kuphumelele ekwelapheni ukubhema, i-cerebral palsy, ukuba umlutha wotshwala.
Imiphumela Ezinhle isifo wezinso, wesisu, isibindi, inhliziyo, amasosha omzimba esibuthaka nenzalo. Anatoliy Ivanovich grigorev igcina izingane izithombe ukuthi yavela ngemva usha amashushu ukuba nothile ingane kubantu lamkhanga.
Baningi okubuyayo kwabesifazane kanye nenzalo. Ngemva kokuya ngezinyawo odokotela akusizanga, futhi ngezinye izikhathi ukuzwa Isinqumo ukuthi "alikho ithemba," abaningi kubo ungadikibali iphupho ukubamba ezandleni ingane yabo waya Rubiaževičy. On iforamu yabesifazane, ngiyabonga eziningi kulabo post-ukwelashwa Grigoryevskaya amacala ayebekwe la madoda izingane emndenini.
Labo abakhuluphele, kakhulu, iya Grigoriev, Anatoly Ivanovich e Rubiaževičy. Ukubuyekeza, ubabele uwine extra isisindo Ukudla, omuhle. On idivayisi yodokotela yabo walalelisisa, ukubuzwa, thola imbangela isisindo okweqile. Ezimweni eziningi, izinkinga zibangelwa yezifo indlala yegilo, izindlala adrenal.
Ungadliwa ukuthi ngahlanganyela amazwana Izivakashi zazihlukile. Ngo Grigorieva ukuba umuntu ngamunye eyedwa. kwesisindo Imiphumela lubonakale ngokushesha. Kodwa ngemva kwamasonto amabili ngcono nebala, nenhlalakahle jikelele. Isisindo waqala walk away kancane.
Madoda, yebo, besitshela izinkinga zabo mancane uzimisele kunabesifazane. izimpendulo zabo ziyisiliva lingandile futhi, ngokuvamile, omuhle. Bhala ukuthi "udokotela - bili."
Yini odinga ukuyazi mayelana amakhambi?
Abantu abaningi bathanda ukuphuza itiye ngamakhambi elimnandi. Kodwa Anatoly weluleka ukuba angenele futhi izitshalo neminye imiphumela emibi. Ngokwesibonelo, itiye Mint, yena alikukhuthazi ukuphuza amadoda. Ngakho-ke kubalulekile ukuba uthintane ochwepheshe. Njengoba elapha inkinga eyodwa, ungenza omunye.
"Ngezinye izikhathi kuziwa okungenangqondo", - uthi Anatoliy Ivanovich grigorev. Travnik, ukubuyekezwa zazo umsebenzi ezimweni eziningi, anikezwa a isici esihle, cites itiye ujwayelene izithasiselo. Tea - a tonic lemon namafutha - opholile. Kuyini lokho okushiwo yile itiye? Lapha nalaphaya, uhlobo ukungalingani emzimbeni. Kuyinto evamile amacala impilo kumele sithathwe omisiwe futhi, mhlawumbe, ayewengamele.
Ungakwazi uphuze Vitamin izimali. Omunye kakhulu elula: okhalweni ezimbili, enye ingxenye mountain ash black noma obomvu, isigamu amaqabunga sembabazane. Ungayithathi kalula izimbabazane. Kuyinto unothile ngamavithamini ebalulekile Vitamin K. Thatha imali kumele ukuthi sidle. I umthamo wansuku - nendebe, ungakwazi, uma uthanda, ihlukaniswe izigaba eziningana.
Izifo - ukuhluleka okungase kubangelwe imvelo, immunocompromised kanye nezimo ezicindezelayo. Kanjani ukuzwa insimbi eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa lokuqala emzimbeni? Grigoriev ukuthi izidingo zemvelo kufanele umemeza ukwaneliseka umuntu: ukudla kumelwe ukwanelisa iphango labantu, isiphuzo - ukoma, ukulala kusiza ukuba sithole amandla. Uma lokhu kungenzeki, ke sekuyisikhathi unake impilo. Phela, lesi sifo singumbulali kulula ukuvimbela esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe.
Biography of Astrid Lindgren: lwezincwadi, imiklomelo kanye nezithombe
Biography empilweni yakho, isithombe, izingane Maria Petrova futhi Alekseya Tihonova
Izimpawu nge-ovulation ekukhulelweni: amaqiniso okusheshayo
Indlela yokwenza intando kahle: ekhaya, efulethini
Meaning of izinombolo iwashi. Izinombolo on iwashi - nokuchazwa amagugu
Izimbuzi: umsuka izibongo futhi abasunguli balo